FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA JAPONEY JAPONEY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika japoney japoney
'Ity i Niko. 1 1/2 taona izy amin'ity sary ity. Clown tena kilasy izy. Mampihomehy ahy sy ny namako foana izy ary mampanontany tena anay ny antony anaovany ny hadalany. '
Lisitry ny alika mitambatra Chin
Ny Chin Japoney dia antsoina koa hoe Chin na Espaniel Japoney. Spaniel kely izy io izay ny hany tanjon'izy ireo dia ny manompo ny olona ho namana. Ny loha-saoka dia manana loha lehibe sy malalaka, maso lehibe mivelatra ary vava fohy sy malalaka. Kely ny sofina, miendrika V, napetraka misaraka ary somary ambanin'ilay satrobon-karandoha, ary rakotra volo tsara. Boribory somary boribory ny handrina. Lalina ny fijanonana ary fohy sy malalaka ny vava. Ny orona dia malalaka amin'ny lakandranon'orona lava dia fohy. Ny orona dia mainty amin'ny alika mainty sy fotsy, ary amin'ny alika miloko hafa kosa dia tokony hitovy amin'ny lokon'ny marika amin'ny palitao ny lokon'ny orona. Misaraka malalaka ny maso, lehibe sy boribory ary mainty ny lokony. Milamina tsara ny maso fa tsy tokony hapetraka lalina. Rehefa mivoaka ny maso vao maratra mora foana. Somary ambany ny manaikitra. Ny haavon'ny vatana sy ny halavany dia mitovy. Ny tongotra eo anoloana dia mahitsy sy miloko volom-borona, ary ny kiho napetraka eo akaikin'ny vatana. Atao avo ny rambony ary ampakarina ambony ambony, aantona amin'ny lafin'ny alika misy volom-borona. Ny palitao dia fotsy misy paty miloko. Ny paty dia mainty matetika, nefa mety ho mena, voasarimakirana, volomboasary, sable, mainty sy fotsy misy teboka mainty, na brindle koa.
Ny Chin Japoney dia biby manaitra, velona ary mahafaly. Izy io dia mahafinaritra, be fitiavana, manan-tsaina, be fitiavana ary tena natokana ho an'ny tompony. Ity karazan-jaza ity dia tia ny olon-drehetra fantany, saingy fantatra fa voatokana manodidina ny olon-tsy fantatra izy ary amin'ny toe-javatra tsy mahazatra dia mifanerasera tsara amin'ity alika ity. Raha manan-janaka kely ianao dia ampianaro izy ireo ho tsara fanahy sy hiaraka amin'ilay alika. Ny Chin dia tsara amin'ny alika sy biby hafa. Ny Chin Japoney dia manana ny sainy manokana ary tiany ho ivon'ny fiheverana. Tsy mpihaza ity karazana ity. Malemy paika izy io, mahafinaritra, nefa milalao ihany. Sensitive, mailamailaka, maloto ary madio. Raha mbola mametraka fitsipika tokony harahina ny alika, ferana izay avela hataony, manome mpitarika tsy tapaka, dia hanaiky ny Chin. Ny chins koa dia manamboatra mpiambina tsara. Ny Chin Japoney dia azo ampianarina hanao fikafika. Alao antoka fa ho mpitondra ny alika ity ianao. Aza avela hivoatra ny alika Syndrome kely alika , fitondran-tena entanin'ny olombelona izay inoan'ny alika mpitondra entana amin'ny olombelona. Ny saoka avela ho mpitondra entana ho an'ny olombelona dia hampivelatra ny karazana fahasamihafan'ny fihetsika isan-karazany, anisan'izany, fa tsy ferana, fanahiana fisarahana , fandrika, fidradradradrana ary fiambenana , ary tsy atokisana amin'ny ankizy.
Hahavony: 7 - 11 santimetatra (18 - 28 cm)
Lanja: 4 pounds (2 kg) - 15 pounds (7 kg)
Misy kilasy roa amin'ny Chins Japoney: ambanin'ny 7 pounds, ary mihoatra ny 7 pounds.
Mora amin'ny olana ara-pisefoana, miankohoka amin'ny hafanana ary manelingelina. Mirona amin'ny wheeze sy ny snore. Mora voan'ny olana amin'ny maso ihany koa. Rehefa manomana alika fiompiana manana maso mipoitra dia tsy tokony ho ekena. Ny mpividy alika kely dia mila mailo fa ny alika buggy maso dia mora iharan'ny olana ary ho vonona amin'izany.
Alika tsara amin'ny fiainana an-trano ny Japanese Chin. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tsy maninona raha tsy misy tokontany. Ity karazana ity dia somary mora tohina amin'ny fihenan'ny maripana.
Tsy mila fanazaran-tena be ny saoka, na izany aza mila atao a mandeha isan'andro . Hahafinaritra azy ireo ny milalao eo an-tokotany malalaka.
Salan'isa latsaky ny 10 taona.
Ankizy 1 ka hatramin'ny 5 eo ho eo
Minitra vitsy isan'andro dia hitazomana ny akanjo ho tsara tarehy. Afangaro moramora ireo kofehy ary borosio moramora, atsangano ny volo avelao hisongadina kely izy. Diovy ny maso isan'andro ary zahao tsy tapaka ny sofina raha misy famantarana ny aretina. Shampoo maina indraindray ary mandro raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Nantsoina hoe Espaniel Japoney tamin'ny voalohany, ary mbola niantso an'io anarana io tamin'ny kliobany sasany, ny Espaniôla Japoney dia nantsoina hoe 'Chin Japoney' tamin'ny AKC tamin'ny 1977. Ny Chin Japoney dia voalohany ary manan-danja indrindra amin'ny alika mpiara-mitory. Na eo aza ny anarana hoe 'Japoney' dia teraka avy amin'ny tanin'i Sina ny karazany. Avy eo dia novolavolaina tany Japon ary nampidirina tany Eropa tamin'ny 1700. Nanjary ankafizin'ny andriana japoney izy io, ary matetika no natolotra ho fanomezana mpanjaka ho an'ny diplaomaty sy ho an'ny vahiny izay nanolotra asa fanompoana miavaka ho an'i Japon. Tamin'ny taona 1853, mpivady iray dia nomena fanomezana ho an'ny Mpanjakavavy Victoria avy any Commodore Perry rehefa niverina avy tamin'ny iraka nanan-tantara hanokatra an'i Japon amin'ny varotra eran-tany izy.
'Ity i Akira. Tsy ampy 1 taona amin'ity sary ity izy, fa izy no alika hendry indrindra nananako. Tena be feo izy rehefa te hilalao na handeha handro. Eto izy maka hatory kely amin'ny masoandro. '
Mochi the Japanese Chin dia tovolahy kely tsara tarehy avy any Alemana izay tena tia milalao, tia mandeha amin'ny jogging, ary feno tsy ampoizina foana.
Willy, 4 taona.
'Abby, Chin japoney albino ahy - mino aho fa mitovy i Abby sy izaho.'
Astroboy the Japanese Chin — hoy ny tompony, 'Manana toetra mahatsikaiky nefa be fiahiana izy. Eto amin'ity sary ity dia manandrana misolelaka amiko izy. '
'Ity no Tigra. Tiany ny miondrika amiko alohan'ny hidirany avy any ivelany. Ataony isaky ny mandeha izany. '
'Ity no Chin Japoney nantsoiko hoe Zorro (noho ny endrik'ilay saron-tava). Mipetraka any Nouvelle Zélande izahay. Mieritreritra aho fa sahala amin'ny Gizmo eo amin'ny pejinao sahady izy! 10 herinandro eo amin'ny sary izy. '
alaskan malamute retriever volamena Mix
Zorro alika japoney Chin amin'ny 10 herinandro
Hijery ohatra misimisy momba ny Chin Japoney
Sary Chin Japoney 1
Alika Chin Japoney: Sarivongana Vintage azo angonina
bernese tendrombohitra mastiff alika kely amidy
pyrenees mahafinaritra sy saint bernard mix
afangaro amin'ny bulldog ny omby
mpiandry ondry alemanina mifangaro amin'ny terrier
afangaro amin'ny bulldog frantsay ny bulldog frantsay
alika zanak'alika pei amidy